Ogaden News Agency (ONA) – Khilaafka Mareykanka & Iiraan oo Sii Xoogeysanaya.
Khilaafka Mareykanka & Iiraan oo Sii Xoogeysanaya.
Waxaa sii xoogaysanaya khilaafka dhanka diblomaasiyadda ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, kadib markii Donald Trump uu diiday heshiiskii Iiraan lala gaadhay sanadkii 2015.
Dowladaha reer Galbeedka qaarkood ayaa ka walaacsan go’aanka Trump ee ku aadan Iiraan ,kadib markii uu sheegay in uu xayiraad hor leh uu ku soo rogayo wadanka iiraan. Xayiraadahan cusub ee uu Mareykanka ku soo rogay dalka Iiraan ayaa soo jiitay cambaareyn caalami ah, hase ahaatee cunaqabatayntan ayaa u muuqata mid saameynteedu aad looga dareemayo gudaha dalka Iiraan.
Dowladaha ku bohoobay Midowga Yurub (EU) ayaa dhankooda sheegay in ay doonayaan in uu Trump ixtiraamo heshiiska niyuukleerka ah ee Iiraan ay la galeen quwada caalamka ee ugu awooda badan kuwaas oo aad ugu kala qaybsan in wakhtigan xaadirka ah ee lagu jiro cunaqabatayn horleh lasaaro dalka Iiraan.
Qorshahan cusub ee cunaqabateynta ah ayaa la hakiyay sanadkii 2015 kaddib hishiiskii niyuukleerka ee xukuumadda Tehraan la gashay quwadaha caalamka balse Trump ayaa sheegay in ay Iiraan ka badbaadi karto cunaqabateyntan haddii ay joojiso horumarinta bacriminta yuuraaniyamka laga sameeyo hubka niyuukleerka iyo haddii ay joojiyaan waxa uu ku tilmaamay taageerada argagixisada barriga Dhexe,